Shaashadda 144 Hz ayaa noqon doonta tii qalabeyn doonta Nubia Red Magic 5G | Androidsis
Shaashad 144 Hz ah ayaa noqon doonta tan qalabeyn doonta Nubia Red Magic 5G, sida uu sheegay madaxweynaha shirkadda
Markii uu waqtigu sii socdo, waxaan aragnaa horumarro waaweyn oo adduunka ah oo ah taleefannada casriga ah ee ciyaarta. Markii hore, hordhacayaasha qaybtan waxay hirgeliyeen bandhigyo 90 Hz iyo 120 Hz, iyo waxyaabo kale, oo loogu talagalay marinnada ciyaaraha. In kasta oo ay xeerar u ahayd moodooyin badan oo diiradda lagu saaray garoonka ciyaarta si ay u yeeshaan guddi bixisa heer aad u sarreeya, haddana tan ayaa loo qaadi doonaa heer kale.
Nubia waxay noqon doontaa soo -saare mobiilkii ugu horreeyay ee hirgeliya shaashadda 144 Hz.Waxaa suurtogal ah in shirkad kale ay horay u sii waddo oo ay bilawdo taleefan leh guddi noocaas ah, in kasta oo ay u muuqato mid aad u macquul ah maadaama aysan jirin wax tilmaamaya. Waxa la hubo waa taas Nubia's Red Magic 5G wuxuu noqon doonaa mobiil leh shaashad 144 Hz ah, taas oo ah wax uu madaxweynaha shirkadu ku soo jeediyay bayaan uu dhawaan ka soo saaray Weibo.
Su'aal ahaan, Ni Fei, oo ah madaxweynaha Nubia, ayaa shaaca ka qaaday in taleefanka casriga ah ee soo socda, oo aan ahayn Nubia Red Magic 5G, uu taageeri doono soo bandhig leh 144Hz cabbir cabbir ah. Tani waxay ka dhigi doontaa mid ka mid ah mobilada ciyaaraha ugu fiican sannadkan, gacmaha hoos loo dhigo, iyada oo la siinayo habsami u ekaanshaha garaafyada, oo aan la jaanqaadi karin jaangooyooyinka sare halkii ilbiriqsi (fps) marka loo eego moodooyinka waxqabadka hoose.
Nubia Red Magic 144G 5Hz ayaa la xaqiijiyay
Haa, Red Magic 5G kuma imaan doonto oo keliya dejinta 144 Hz ee caadiga ah, laakiin waxaa loo beddeli karaa 120 Hz, 90 Hz ama 60 Hz, kaas oo ah midka caadiga ah ee aan ku aragno inta badan taleefannada gacanta ee suuqa yaal. Tan waxaa lagu muujiyey shaashadda shaashadda ee aan kor ku soo dhejinnay, taas oo ahayd tii fulintu ku dhejisay darbiga shabakadda bulshada ee microblogging -ka Shiinaha.
Tilmaamo kale ayaa weli la ogyahay, laakiin waxaan horeyba u soo qaadan karnaa in Snapdragon 865 iyo shaashadda teknolojiyadda AMOLED ay tahay tii keeni lahayd heer sare. Taariikhda la sii daayay weli lama garanayo, laakiin waxaan dhowaan ogaan doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Shaashad 144 Hz ah ayaa noqon doonta tan qalabeyn doonta Nubia Red Magic 5G, sida uu sheegay madaxweynaha shirkadda
Amarada Dalbaday ee Huawei ee Nidaamka Waxsoosaarka SMIC cusub ee 14nm
Sharaf View30 Pro in lagu soo bandhigi doono MWC 2020